Manana Harry Potter ve i Disney plus? - LifeBytes | LifeBytes
Manana Harry Potter ve i Disney plus?
Encarni Arcoya | 29/05/2022 20:27 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2022 08:37 | fahafinaretana
Miaraka amin'ny sehatra maromaro sy sarimihetsika izay ananantsika tsy azo ihodivirana ny tsy fahitana ny toerana hijerena ny sarimihetsika ankafizinay. Matetika ny milina fikarohana dia feno fanontaniana momba ny hoe manana Harry Potter i Disney Plus, na afaka mijery ny vanim-potoana farany an'ny Doctor Who ao amin'ny Netflix isika.
Raha anisan'ireo mitady ny sarimihetsika Harry Potter ianao ary manontany tena raha manana azy ireo i Disney Plus dia ho hitanao eto ny valiny. Na dia mety tsy tianao aza izany.
1 Disney Plus: inona no katalaogy ananany?
2 Manana Harry Potter ve i Disney Plus?
3 Ho ao amin'ny Disney Plus ve i Harry Potter amin'ny ho avy?
4 Aiza koa no ahitanao an'i Harry Potter?
5 Inona no fanampiny azonao jerena ao amin'ny HBO Max
6 Sarimihetsika toy ny Harry Potter
6.1 Ny Saga Percy Jackson
6.2 Ny taranany
Disney Plus: inona no katalaogy ananany?
Disney Plus dia sehatra iray ao anatiny hahitanao firavaka mahafinaritrana ankehitriny na taloha. Angamba, miaraka amin'ny Netflix, ilay manana sokajy betsaka indrindra ary ahafahanao mijery sariitatra fa koa sarimihetsika sy karazana hafa.
Tamin'ny voalohany, noho ny anarana, dia noheverina fa ho an'ny ankizy ihany, fa ny marina dia mbola misy zavatra betsaka kokoa. Ohatra, singa roa lehibe dia Marvel sy Star Wars. Tamin'ny alalan'izy ireo ihany no nahafahany nanampy sarimihetsika, andian-tantara ary horonantsary fanadihadiana marobe izay mirakitra mpijery maro kokoa, ary matetika miteraka fahalianana be ny famoahana azy voalohany.
Miaraka amin'izany dia manana horonantsary fanadihadiana ianao, toy ny an'ny National Geographic sy ny hafa izay misarika ny saina noho ny ataon'ireo olo-malaza.
Tsikelikely dia manampy votoaty bebe kokoa amin'ny katalaony izy, miaraka amin'ny sehatra Star izay tafiditra ao anatin'ny Disney. Noho izany, mankafy ianao amin'izao fotoana izao:
Ny zavatra rehetra Disney: sarimihetsika, andian-tantara, short animation, anisan'izany ny The Simpsons.
Pixar: miaraka amin'ireo sarimihetsika izay nifaninana tamin'ny Disney tamin'ny voalohany ary tafiditra ao anatin'izany ankehitriny.
Marvel: miaraka amin'ny sarimihetsika, andian-tantara ary fanadihadiana momba ny fomba nanaovana azy.
Adin-kintana: miaraka amin'ny andian-tantara sy sarimihetsika ihany koa.
National Geographic: miaraka amin'ny fanadihadiana.
Star: eto ianao dia hahita sarimihetsika sy andian-tantara ho an'ny olon-dehibe kokoa.
Ny marina dia raha misoratra anarana amin'ny Disney Plus ianao ary te hijery ny sarimihetsika Harry Potter Miala tsiny izahay milaza aminao fa tsy ho azo atao izany. Tsy manana an'ireo sarimihetsika ireo ao amin'ny katalaoginy i Disney, ary mbola tsy nanana azy ireo taloha koa., satria tsy hita afa-tsy ao amin'ny Amazon Prime izy ireo ary, ny sasany, ao amin'ny Netflix. Raha ny marina, tsy ao amin'ireo sehatra ireo intsony izy ireo (Amazon Prime dia afaka mamela anao hanofa na hividy iray).
ankehitriny, Ny marina dia ny sarimihetsika Harry Potter rehetra, ny tantara manontolo, anisan'izany ireo Biby Fantastic roa sy ny toerana hahitana azy ireo dia ao anatin'ny katalaogin'ny HBO Max. Raha te hahita azy ireo ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ity sehatra ity ary misoratra anarana.
Ho ao amin'ny Disney Plus ve i Harry Potter amin'ny ho avy?
Manomboka amin'ny fototra izay tsy fantatrao mihitsy. Fa androany, an'ny HBO Max daholo ny sarimihetsika Warner ary any ihany no ahitanao azy ireo. Noho izany, raha mifantoka amin'ny angon-drakitra amin'izao fotoana izao isika, ny marina dia tsy azo inoana fa hahazo ny zon'ny Harry Potter amin'ny ho avy i Disney Plus. Tsy midika akory izany hoe tsy azo atao izany, fa amin'izao fotoana izao dia tsy hitantsika fa azo atao izany.
Aiza koa no ahitanao an'i Harry Potter?
Talohan'ny nilazanay anao fa ny saga Harry Potter manontolo dia ao amin'ny HBO Max, fa raha ny marina dia misy toerana maro ahitanao azy. Tanisainay ho anao izy ireo raha toa ka tsy manana famandrihana amin'ity sehatra ity ianao:
Play Store: Eto ianao dia afaka mividy ny sarimihetsika rehetra, na dia somary lafo aza.
Apple: Azonao atao ny manofa azy ireo amin'ny vidiny raikitra, na dia tsy manana ny sarimihetsika rehetra aza.
Youtube: Ao amin'ny Youtube dia afaka manofa no mividy azy ireo.
Amazon: Edisiona mpanangom-bokatra miaraka amin'ireo horonan-tsary 8 sy fanampim-panazavana sasany. Raha tsy manana HBO Max ianao ary tianao ireo sarimihetsika ireo dia ity angamba no safidy mora indrindra.
Inona no fanampiny azonao jerena ao amin'ny HBO Max
Raha manapa-kevitra ny hahazo HBO Max ianao amin'ny farany tokony ho fantatrao fa hanana fanampiny ianao izay tsy homeny anao amin'ny sehatra hafa, ary zavatra tena tian'ny mpankafy izany.
ETamin'ny 1 Janoary 2022, navoaka ny fanadihadiana Harry Potter: Miverena any Hogwarts, fihaonana amin'ny tsingerintaona faha-20 izay nanatrika ny ankamaroan'ny mpilalao sarimihetsika, ary tsara fanahy izy ireo nanambara ny tsiambaratelon'ny mpilalao sy ny sarimihetsika tsy fantatra.
Ka ankoatra ny sarimihetsika, hanana fanadihadiana iray hafa ianao hijerena ny fiovan'ny endri-tsoratra ary izay rehetra tsy fantatra momba ilay sarimihetsika.
Sarimihetsika toy ny Harry Potter
Na dia tsy manana Harry Potter aza i Disney Plus, tsy midika izany fa tsy manana sarimihetsika afaka mifaninana amin'ny saga wizard. Raha ny marina dia manoro hevitra vitsivitsy izahay:
Ny Saga Percy Jackson
Amin'ity tranga ity tsy mpanao ody izy fa demigod ka tsy maintsy miofana sy mianatra, ka hiaina ny zava-niainany ao amin'ny toby fanofanana andriamanitra sy zavaboary mahagaga.
film roa ihany no misy, nijanona ny tantara fa misy boky mitohy amin'ny aventuren'ity lehilahy protagonista ity sy ny namany.
Raha nihalehibe niaraka tamin'ireo andriambavy Disney sy ireo "mpimasy ratsy" azy ireo ianao dia azo antoka fa ho tianao ity tantara ity. Raha ny marina dia fikorontanan'ny klasika izany, miaraka amin'ireo zanaky ny andriambavy sy ireo tena ratsy.
Anisan'ireo ho hitanao ny zanak'i Cruella de Vi, zanakavavin'i Maleficent, zanak'i Jafar na zanakavavin'ny mpanjakavavin'i Snow White, Grimelda na Grimhilde. Mazava ho azy fa hisy ihany koa ny sasany amin'ireo tsara, ary rehefa miresaka momba ny sehatra ivelan'ny angano izy ireo dia lasa zava-misy kokoa.
Tsy film fanta-daza ity, fa ny marina dia mahagaga ihany koa. Ao anatin'izany no ahitantsika ny protagonista izay miditra ao amin'ny Sage Academy of Magic Training. Noho ny tsy fandriam-pahalemana anefa dia voatendry ho any amin’ny kilasy « magie reverse » ilay tovovavy.
Fantatrao izao raha manana Harry Potter i Disney Plus, ny zavatra manaraka azonao anontaniana ny tenanao dia raha mendrika ny hanana HBO Max. Tsy mbola feno ny katalaoginy, fa ny marina dia tsy iray amin'ireo sehatra lafo vidy indrindra izy io ary vao haingana dia nanao tolotra mendrika maro (manana azy mandrakizay amin'ny antsasaky ny vidiny, ohatra), izay azo averina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fahafinaretana » Manana Harry Potter ve i Disney plus?
Ahoana no ahafantarana raha nandalo ny teoria aho